Activating Kaspersky 2010
on Sun Sep 26, 2010 9:23 am
10. Every 30 days Kaspersky will ask foralicense, simply click Activate Beta and boom you're good to go Smile
If it still doesn't work, some users found re-installing the application worked, or removing the existing license key allowed the patch to work.
*Make sure Kaspersky isn't running
မကွေးက ကျွန်တော့်အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းက ရှဲလုပ်လိုက်တာပါ။ အခု ပြန်ရှဲလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာလို မပြန်တာက လူအများကြီး သိကုန်ရင် သိပ်မကောင်းဘူးလို့ ထင်လို့ပါ။ သူများစီးပွားရေးကို ထိခိုက်တယ်လေ။ စမ်းသပ်ကြည့်ထားပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။